IPFire 2.27 Core 160 Inosvika ichiti Kuenda Kune Python 2, Tsigiro Inowedzera, Zvidzoreso, uye Zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
IPFire 2.27 Core 160 inosvika ichiti kuonekana nePython 2, kutsigira kugadzirisa, kugadzirisa uye nezvimwe
Mazuva mashoma apfuura kuvhurwa kwe iyo nyowani vhezheni yekuparadzira kwekugadzirwa kwema routers uye firewalls "IPFire 2.27 Core 160" mune iyo hombe nhamba yekuvandudzwa yakaitwa kune iyo system package, pamwe nedzimwe shanduko, pakati payo kugadzirira kwekuguma kwekutsigirwa kwePython 2 uye nezvimwe zvinomira.
Kune avo vasingazive kugoverwa kweLinux ini ndinogona kukuudza izvozvo uku kugoverwa kwelinux yakanangana nekugadzika kuri nyore, kubata kwakanaka uye nhanho yepamusoro yekuchengetedza, yakanyatsogadzirirwa kuita firewall mabasa (firewall) uye nzira mune yemuno network.
Iyo inodzorwa ne intuitive web interface kuburikidza nebrowser, iyo inopa yakawanda sarudzo yekumisikidza yeane ruzivo uye novice sysadmins.
IPFire inoratidzirwa neyakareruka yekumisikidza maitiro uye kurongeka kwemaitiro kuburikidza neyakajeka webhu interface, yakazara neakajeka magiraidhi.
Iyo system ndeye modular, pamusoro pekutanga kwepakeji yekusefa mabasa uye traffic manejimendi yeIPFire, iwo ma module Ivo varipo game kuita system yekudzivirira kurwiswa meerkat yakavakirwa, kugadzira faira refaira (Samba, FTP, NFS), mail server (Cyrus-IMAPd, Postfix, Spamassassin, ClamAV uye Openmailadmin) uye purinda server (CUPS), iyo musangano we gedhi reVoIP rakanangana neAsterisk uye Teamspeak, kugadzirwa kwenzvimbo isina waya yekuwana mukana, kurongeka kweaudio uye vhidhiyo yekufambisa server (MPFire, Videolan, Icecast, Gnump3d, VDR). IPFire inoshandisa yakakosha Pakfire package maneja kuisa plugins.
1 Main nyowani maficha ePFire 2.27 Core 160
Main nyowani maficha ePFire 2.27 Core 160
Iyi vhezheni itsva inomiririra gadzira nzira yekubvisa Python 2 rutsigiro mune inotevera vhezheni yeIPFire. Kugoverwa kwacho hakuchina kusungirwa kuPython 2, asi zvimwe zvinyorwa zvetsika zvinoramba zvichishandisa bazi iri, saka vagadziri vacho vari kupedzisa shanduko kune iyi vhezheni.
Imwe yeshanduko inomira mushanduro iyi nyowani ndiyo kuisa mapaketi vanobata, network interfaces, uye mitsara kune imwechete CPU cores yakaverengerwa kudzora latency uye kuwedzera mashandiro yekunyanyisa traffic kugadziriswa mu network subsystem kudzikisa kutama pakati peakasiyana maCPU cores uye kuwedzera processor cache kushanda.
Iyi yekuvandudza inounza shanduko yekutanga iyo inobvumidza iyo network mapindiro anoitsigira iyo kutumira mapaketi ayo ndeaya kuyerera kumwe chete kune imwechete processor processor. Izvi zvinobvumidza kutora mukana weiri nani cache nzvimbo uye firewall injini pamwe neiyo yekudzivirira yekudzivirira system kubatsirwa kubva izvi, kunyanya nenhamba hombe yekubatana uye kunyanya pahardware ine madiki CPU macache.
Zvakare muIPFire 2.27 Core 160 sevhisi redirection rutsigiro yakawedzerwa kune injini yemoto uye iwo magiraidhi anoshandurwa kuti ashandise iyo SVG fomati.
Pane chikamu chegadziriro package package, tinogona kuwana kuti shanduro dzakavandudzwa dzeCURL 7.78.0, ddns 014, e2fsprogs 1.46.3, ethtool 5.13, iproute2 5.13.0, zvishoma 590, libloc 0.9.7, libhtp 5.0.38, libidn 1.38, libssh 0.9.6 yakaunzwa .8.7, OpenSSH 1p1.1.1, anovhura 8.45k, pcre 21.07.0, poppler 3, sqlite3.36 1.9.7, sudo 2p5.9.3, strongswan 5.0.7, suricata 12.5.4, sysstat 2.1.1, sysfsutils XNUMX.
Nepo mapulagi akagadziridzwa shanduro dzealsa 1.2.5.1, shiri 2.0.8, clamav 0.104.0, faad2 2.10.0, freeradius 3.0.23, frr 8.0.1, Ghostscript 9.54.0, hplip 3.21.6, iperf3 3.10. 1, lynis 3.0.6, mc 7.8.27, monit 5.28.1, minidlna 1.3.0, ncat 7.91, ncdu 1.16, taglib 1.12, Tor 0.4.6.7, traceroute 2.1.0, Postfix 3.6.2, zvinonhuwira 0.15.0 .
Izvo zvinoonekwa zvakare kuti kugona kushandisa proxy yewebhu kwakapihwa pane masystem asina yemukati network uye iyo registry inoratidza mazita emaprotocol panzvimbo enhamba.
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo Nezve iyi nyowani vhezheni yeIPFire, unogona kutarisa iwo mafaera mu inotevera chinongedzo.
Chekupedzisira, kune avo vanofarira kugona kurodha vhezheni iyi nyowani, unogona kuwana akagadzirira kuisa mifananidzo ye x86_64, i586 uye ARM zvivakwa kubva kune yepamutemo webhusaiti yekuparadzira muchikamu chayo chekurodha. Kukura kwekuisa ISO mufananidzo ndeye 406 MB (x86_64, i586, ARM, AArch64).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » IPFire 2.27 Core 160 inosvika ichiti kuonekana nePython 2, kutsigira kugadzirisa, kugadzirisa uye nezvimwe
Fairphone 4: nyowani smart nhare ine kana isina Android